INokia D1C iya kufika kwintengiso ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo | Iindaba zeGajethi
Kwaye sihlala sithetha ngeNokia. Ngosuku lweemodeli ezintsha zakwaNokia ezithiwe thaca, zicwangciselwe iNkomfa yeHlabathi yeBhola eKhatywayo yonyaka ozayo, siyakususa amathandabuzo kwaye ekugqibeleni siza kuyeka ukuthetha phantse ngokungaboni kwaye amarhe anxulumene nenkampani ekhokele ukumakishwa kweefowuni ezingezizo ezobukrelekrele iminyaka emininzi. Kuninzi okuthethwayo kwezi nyanga zidlulileyo malunga nezinto eziza kusungulwa yinkampani. Amarhe amva nje akhomba kwiNokia D1C, ekusenokwenzeka ukuba ayibizwa njalo (ayilogama lokurhweba kwaphela), hit the market with variants ezimbini.
Oku kungabonisa ukuba inkampani yaseFinland inokuzimisela ukuthengisa iifowuni ezifanayo kumazwe ahlukeneyo, into engeyiyo entsha kwaye uninzi lweenkampani ezenzayo, ezinokubonisa ukuba AbakwaNokia bafuna ukubuyela kwintengiso ngomnyango omkhulu, into enokuthi ibe yinto engenanto kuba umnyango omkhulu unokuba ludonga lwamatye kwaye ukubetha kunzima kunokuba bekulindelwe. IBlackBerry ngomnye umzekelo.
Enye yezinto ezahlukileyo ze-D1c iya kulawulwa yi-Snapdragon 430, iya kulawulwa ngu 2 GB ye-RAM, iya kuba nescreen esine-intshi ezintlanu HD kunye nekhamera ngasemva enesisombululo se-5 mpx. Ngelixa enye imodeli yayiya kulawulwa ngu I-3 GB ye-RAM, isikrini esingu-5,5-intshi ngesisombululo esipheleleyo se-HD kwaye kwiifoto ziya kudibanisa i-16 mpx sensor. Ngokumalunga neprosesa eya kuthi iphathe eyona modeli inamandla, kuya kucingelwa ukuba ayizukuba yi-Snapdragon 430, kodwa ibaluleke kakhulu, kodwa asinalo ulwazi malunga nayo.
Okucacileyo kukuba ukufikelela kwintengiso kwikota yokuqala yonyaka olandelayo, ezi ndawo zinokulawulwa yi-Android 7.0 Nougat, Yinto esisiseko ukuba awufuni ukuba iitheminali zakho ziye kufela kwindawo yentengiso ngexesha lokuqala, ubuncinci kwizigidi zabasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » INokia D1C iya kufika kwimarike ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo
Ingqalutye ayinakumelana nokutsalwa kweemarike kwaye ithengwa nguFitbit